Thu, Jul 9, 2020 at 11:32am
काठमाडौँ, ५ भदौ नेपाल कला परिषद्मा आजदेखि चित्रकला प्रदर्शनी शुरु भएको छ । आधुनिक कला समाज (सोमा)ले आयोजना गरेको प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रममा डा उपेन्द्र महतोले नेपाल आर्थिक हिसाबले कमजोर भए पनि कला, संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा निकै अघि रहेको बताउनुभयो । उहाँले कला संस्कृतिको माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा परिचत गर्न कलाकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । “समृद्ध मुलुक बनाउन कलाकार मानसिक,..
काठमाडौँ, ५ भदौ अन्तर्राष्ट्रिय जलरङ समाज (आइडब्लुएस) नेपालको आोजना तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाफा) को सहकार्यमा काठमाडौँमा १० दिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी’ हुने भएको छ । समाजको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसर पारेर यही भदौ ७ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँथित प्रतिष्ठानको कार्यालय नक्सालमा कला प्रदर्शनी हुने आइडब्लुएस नेपालका अध्यक्ष एनवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदर्शनीमा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, चीनका चर्चित कलाकारको..
काठमाडौं, ५ भदाै । सरकारले आइफा अवार्डका लागि बजेट छुट्याएकाे छैन । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइफा अवार्डका लागि बजेट नछुट्याएकाे बताएका हुन् । ‘आइफा अवार्ड तत्कालका लागि नेपालमा नहुने टुंगो भइसकेको छ। त्यहीकारण हामीले बजेट विनियोजन गरेका छैनौँ’, खतिवडाले भने, ‘अवार्डको लाभहानीबारे अहिले केही थाहा छैन। सरकारले तत्काल गर्ने सोच पनि बनाएको..
काठमाडौं, ४ भदाै । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ फिल्म निर्देशक किशोर राना मगरको निधन भएको छ । लामो समयदेखि मृगौला रोगबाट पीडित निर्देशक राना मगरको ५४ वर्षकाे उमेरमा निधन भएकाे हाे । ५४ वर्षीय रानाको बुधबार निधन भएको परिवारले जनाएको छ । लामो समय फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय रहेका निर्देशक रानाले सीमारेखा, करोडपति, राँको, कान्छी, बन्धकी, एक नम्बरको पाखे लगायत कैयन् फिल्ममा निर्देशन गरेका छन् ।..
मुम्बई, ३ भदाै । ‘कौन बनेगा करोडपती’ का सञ्चालक अमिताभ बच्चन शोको ११ औं सिजन व्यस्त छन् । बलिउडका महानायक भनिने बच्चन पछिल्लाे समय ‘कौन बनेगा करोडपती’ का लागि चर्चामा रहदै आएका छन् । शोको ११ औं सिजन सोमबार रातीदेखि सोनी च्यानलमा सुरु भइसकेको छ । ११ औं सिजन सुरु हुनुअघि अमिताभले आफ्नो जीवनबारे केही बताए । निकै फिट देखिने अमिताभको ७५ प्रतिशत कलेजो..
पोखरा, २ भदौ । एकसय असीऔँ विश्व फोटोग्राफी दिवसका अवसरमा पोखरामा आज प्रभातफेरी गरिएको छ । फोटोग्राफर सङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित प्रभातफेरी पोखराको मानव अधिकार चोकबाट शुरु भई चिप्लेढुङ्गा महेन्द्रपुल हुँदै पुनः मानव अधिकार चोकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । उक्त क्रममा देशव्यापी साइकल भ्रमणमा निस्कनुभएका खोटाङका युवा कर्ण श्रेष्ठलाई सम्मान गरियो । पर्र्यटन प्रवद्र्धन गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनका लागि देश दौडाहामा..
‘राखी’ फेरी विवादमा, हनिमुनका हट 'अवतार' बाहिरिए
पाेखरा ३१ साउन बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्त गोप्य विवाह गरेको आरोप लागेको भन्दै आज दिनभर मिडियामा छाएकी थिइन् । उनले आइतबार भारतीय मूलका विदेशी नागरिकसँग मुम्बईको एक होटलमा विवाह गरेको भन्दै उनको चौतर्फि चर्चा चलेको थियो । उनलेले क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको परम्पराअनुसार बेहुली भएको तस्बिर आइतबार बेलुका सञ्चारमाध्यममा चुहिएपछि उनको विवाहको हल्ला चलेको हो। आफुले भारतीय मूलका विदेशीनागरिकसँग भएको भन्ने समाचार गलत भएको..
नायिका शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं, १ भदाै । बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी नायिका नायिका शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यही कुरालाई लिएर शिल्पा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेकी थिइन् । चलचित्र निर्माता छवि ओझाकी जेठी पत्नी हेमा..
काठमाडाैं, १ भदाै । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएकी छन्।बहुविवाह मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले छवी ओझा र शिल्पा पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरु फरार थिए। शिल्पा र छविको सम्बन्ध विच्छेद विवाद जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। आफूविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सर्वप्रथम अभिनेत्री पोखरेल उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा लिएर पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतमा..
अभिनेत्री करिश्माले रवि लामिछानेका सर्मथकहरुलाई भेडाको संज्ञा दिँदै लेखिन् यस्तो स्टाटस
काठमाडौं, १ भदौ । शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा अहिले पत्रकार लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की अहिले हिरा’सतमा बसेका छन् । यस विषयमा चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरले मुख खोलेकी छिन् । अहिले लामिछाने समर्थकहरुले विरोध पनी जनाउँदै आइरहेका छन् । यो बीचमा प्रहरी र समर्थककाबीच झ’डप हुने अवस्थासम्म आएको छ । यो आफैंमा चिन्ताजनक अवस्था देखिन सक्ने भएकाले सावधानि अपनाएर प्रहरीलाई..
काठमाडौँ, ३२ साउन वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको निधन भएको छ। अधिकारीको शनिबार बिहान आफ्नै निवास डल्लुमा निधन भएको हो । नेपाल चलचित्र कलाकार संघकी उपाध्यक्ष तथा अभिनेत्री रेजिना उप्रेतीले अधिकारीको आजै अन्त्यष्टि गरिने जानकारी दिईन् । वि.स. २००३ सालमा काठमाडौंको असनमा जन्मेकी अधिकारीले ६ वर्षकी छँदा नेवारी नाटक ‘कचिमचा’ (काँचो माटो) बाट अभिनय यात्रा थालेकी थिइन् । नाटकमा निकै जमेकी उनले चिनो, कन्यादान, वसन्ती,..
काठमाडौँ, ३१ साउन । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेत्रीहरु पनि छन् । जो एकअर्कालाई सिधा देखे पनि टाउको बटारेर हिड्छन् । किनभने उनीहरुको यसअघि नै ब्वाईफ्रेन्ड र फिल्मको होडबाजीले दुश्मनी रहेको छ । आज हामी बलिउडका त्यस्ता ठुलो दुश्मनी रहेको १० चर्चित अभिनेत्रीमा बारेमा कुरा गदै छौँ । हेर्नुस् को को हुन् ? रानी र ऐश्वर्या बलिउडका चर्चित अभिनेत्री रानी मुर्खजी र ऐश्वर्या रायको..
काठमाडौँ, ३१ साउन । गाईजात्रा भन्नसाथ हाँस्यव्यंग्य गर्ने परम्परागत व्याख्या परिवर्तन हुँदैछ। कारण, गाईजात्रामा केन्द्रित हाँस्यव्यंग्य परम्परा हराउँदैछ। मल्लकालमा सुरू भएको गाईजात्रा केन्द्रित हाँस्यव्यंग्य परम्पराले पछिल्लो समय विभिन्न स्टेजहरू पाउने गरेका थिए। राजनैतिक र सम–सामाजिक विषयमाथि व्यंग्य गर्दै आयोजना हुने गाईजात्रा विशेष कार्यक्रमहरू सुरुवाती दिनमा टिकाउन भने सहज थिएन्। हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलका अनुसार राजनैतिक अस्थिरतामाथि व्यंग्य गर्दै आयोजना हुने गाईजात्रा विशेष कार्यक्रमहरूको..
मुम्बई, ३० साउन। बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हाको निधन भएको छ। फोक्सो र मुटको समस्याबाट पीडित सिन्हाकाे उपचारकै क्रममा बिहीबार दिउँसो निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। फोक्सो र मुटको समस्याबाट पीडित सिन्हाको केही दिनदेखि मुम्बइको जुहुस्थित एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। स्वस्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। सिन्हा ७०–८० को दशककी चर्चित अभिनेत्री हुन्। उनका ‘छोटीसी बात’, ‘रजनीगन्ध’,..
मिया खालिफले पोर्न कम्पनीविरूद्ध मुख खोलिन्, भन्छिन्- सोझा महिलालाई काम उक्साउँदै शोषण गरिन्छ
एजेन्सी। पोर्न भिडियो बनाउने उद्योगमा सोझा महिलालाई काम गर्न प्रेरित गर्दै शोषणको सिकार बनाउने गरेको कुरा पूर्व पोर्नस्टार मिया खालिफाले बताएकी छिन्। पोर्न उद्योगविरूद्ध बोल्दै उनले सोझा महिलालाई फसाउने गरेको बताएकी हुन्। आफ्ना अतीतबारे बोल्न नचाहने खालिफा अमेरिकी लेखक मेगन अबोटसँग धेरै कुरा खुलेर सुनाइन्। २६ वर्षीया खालिफाले सन् २०१४ देखि २०१५ सम्म पोर्न उद्योगमा काम गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो विगतबारे हुने..
बलिउड नायिका ऐश्वर्या रायले गरेका ७ ठूला गल्ती
काठमाडौं, २९ साउन बलिउडमा सफल र सुन्दर नायिकाको रुपमा चिनिने ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनयमा निकै पोख्त छिन् । ४० वर्ष नाघिसकेकी ऐश्वर्याको सुन्दरता अझै उस्तै आर्कषक छ । अभिषेक बच्चनसँग विहे गरेपछि फिल्मी दुनियाँबाट केही पर रहेकी ऐश्वर्या समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छिन् । उनले आफ्नो फिल्मी करियरमा पनि निकै उतारचढाव भोगेकी छिन् । साथै, जीवनका मोडहरुमा थुप्रै गलग..
शिल्पा शेट्टीले पाइन्ट सम्हाल्न नसकेपछि …
एजेन्सी, २८ साउन बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको एक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उनी सोही तस्वीरका कारण यतिबेला ट्रोलको शिकार समेत भएकी छिन् ।सार्वजनिक तस्वीरमा उनी एक हातमा छाता र अर्को हातले आफ्नो जिन्स पाइन्ट समाउँदै निकै असहज देखिएकी छिन् । बेला- बेलामा चर्चामा आउने उनी अहिले कम्मरको साइजभन्दा ठूलो जिन्स पाइन्ट लगाउँदा चर्चासँगै र ट्रोलको शिकार बनेकी हुन् ।उनले..
गुगलको सर्वाधिक खोजी हुने सूचीमा नरेन्द्र मोदीलाई पछि पार्दै सन्नी लियोनी
एजेन्सी, २८ साउन गुगलको सर्वाधिक खोजी गरिने व्यक्तिमा सन्नी लियोनी परेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बलिउड अभिनेता सलमान खान तथा शारू खानलाई पछि पार्दै उनी पहिलाे स्थान बनाउन सफल भएकी हुन् । यस वर्ष अगस्टसम्मको आँकडामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बलिउड अभिनेता सलमान खान तथा शारू खानलाई पछि पार्दै लियोनी सर्वाधिक खोजी गरिने व्यक्तिमा परिन्। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले भने उनको भिडियोको बारेमा धेरै..
मनोरोगीहरुको वेदनालाई तीज गीतमार्फत प्रस्तुत
चिप्लेढुङ्गा, २८ साउन । तीज पर्व नजिकिँदै गर्दा पोखराकी अम्बिका ढकालले मनोरोगीहरुको वेदनालाई तीजे गीतमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तीज गीतको मर्म विपरीतका गीतहरु बजेर रमझम बढिरहेका बेला ढकालले सामाजिक विषयवस्तुसँग जोडेर उपेक्षामा परेका मनोरोगीहरुको वेदनालाई गीतमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सामाजिक विषयवस्तुमाथि साहित्यिक कलम चलाउँदै आउनुभएकी ढकालले सामाजिक परिवर्तन र सचेतनाका लागि गीत सङ्गीतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । मानसिक रुपमा अस्वस्थ..
टाइगर श्रॉफलाई सोधियो - के तपाईं भर्जिन हो ? नायकले दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौँ, २७ साउन चकलेट बोयको इमेज बनाउने नायक टाइगर श्रोफ एक्सन हिरोको रुपमा पनि परिचित छन् । यसबाहेक उनी दिशा पाटनीसँगको सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा छन् । हालै उनलाई सोसल मिडियामा यस्तो प्रश्न सोधिएको छ, जसको उनले चलाखीपूर्ण तरिकाले जवाफ दिएका छन् । वास्तवमा टाइगरले इन्स्टाग्राममा ‘आस्क मी एनिथिङ्ग’ सेशनमा प्रशंसकहरुसँग कुरा गरिरहेका थिए । यतिबेला थुप्रैले उनलाई रोचक एवं नीजि प्रश्न पनि..
कृति सेननको गुनासो : वरूणले मलाई कसैसँग डेट गर्न दिदैंनन् !
काठमाडौँ, २६ साउन बलिउड अभिनेत्री कृति सेनन सिनेमाबाट उनले प्रशंसा बटुलेकी छन् सिनेमाका बारेमा सुखद् समाचार सुनिरहेकी कृतिले डेटिङ जान नपाएको गुनासो गरेकी छन्। उनले आफूलाई इच्छा भए पनि अभिनेता वरूण शर्माका कारण कोहिसँग डेटिङ जान सम्भव नभएको खुलासा गरेकी हुन्।उनले शर्मा आफूलाई लिएर एकदमै रक्षात्मक रहेकाले डेटिङ जान नपाएको बताउँछिन्। ‘वरूण मलाई लिएर एकदमै रक्षात्मक छन् र उनले मलाई कहिले कसैलाई डेट..
रजनीकान्तले भने - मोदी र अमित शाहको जोडी भगवान कृष्ण र अर्जुन जस्तो
एजेन्सी, २६ साउन । बलिउडमा जमेका सुपर स्टार अभिनेता रजनीकान्तले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको जोडी भगवान कृष्ण र अर्जुनको जस्तै रहेको बताएका छन् । जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको हैसियत प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयप्रति मोदी र अमित शाहलाई बधाई ज्ञापन गर्दै रजनीकान्तले यस्तो बताएका हुन् । ‘जम्मू कश्मीर मिसनमा म मोदी र शाहलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु,..
गायक आतिफ असलमको भारत विरोधी अभिव्यक्तिले चर्को आलोचना !
काठमाडौं, २५ साउन पाकिस्तानी गायक आतिफ अस्लम पाकिस्तानमा जति चर्चित छन् बलिउडमा पनि उनको चर्चा उत्तिकै छ। भारतीय गायक जत्तिकै उनको माग भारतीय बजारमा छ। तर पछिल्लो समय उनी विवादमा परेका छन्। भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु कस्मिरलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार हटाएको छ। जम्मु कस्मिरमा मुस्लिम बाहुल नागरिक बसोबास गर्दछन्। पाकिस्तानले भारतको यस कार्यको निन्दा गरेको छ। पाकिस्तानले यस कार्यको निन्दा..
‘मिस टुरिज्म’ को उपाधि विराटनगरकी आरजु पोखरेललाई !
काठमाडौँ, २५ साउन यस वर्षको (सन् २०१९) ‘मिस टुरिज्म’ को उपाधि विराटनगरकी आरजु पोखरेलले जितेकी छन् । १० प्रतियोगीलाई आज भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्दै २१ वर्षीया पोखरेलले सो उपाधि चुमेकी हुन् । निर्णायक नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) का अध्यक्ष सिएन पाण्डेले सोधेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ कार्यक्रमलाई लाई सफल पार्न गर्नुपर्ने प्रमुख तीन कामहरु के–के हुन् ?..
काठमाडौँ, २५ साउन । एलिजा कटुवाल २०५० सालमा जन्मिएकी हुन् । उनी फेसन डिजाइनर र ग्ल्याल्मर क्षेत्रमा जम्न चाहन्छिन् । उनी नेपालका रमणीय क्षेत्रमा पनि घुम्न चाहन्छिन् । उनी ब्वाइ फ्रेन्डले धोका दिए अर्को खोजेर विवाह गर्ने बताउँछिन् । उनीसँग प्रेम, विवाहलगायतका विषयमा राजधानीका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । यही क्षेत्र किन रोजियो ? म काठमाडौं आएको सात वर्ष भयो ।..
प्रचण्डकी नातिनीकाे गीतमा 'कार्टुन्ज क्रु'काे दमदार नृत्य (भिडियाेसहित)
काठमाडौं, २४ साउन । गायिका स्मिता दाहालको अर्को नयाँ गीतकाे भिडियाे सार्वजनिक भएकाे छ । शुभ मिडिया हाउसको प्रस्तुतिमा दाहाल तथा राजनराज शिवाकोटीको स्वर रहेको ‘मायालु तिमी कहाँ छौ’ गीतकाे भिडियो आज डिजिटल रुपमा सार्वजनिक गरिएको हो । अहिले यो गीत युटुवको ट्रेडिङ नम्बर तीनमा रहन सफल भएको छ । आज अपराह्न गज्जबको टेलिभजनको युट्युब च्यानलमार्फत गीतको औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ..
मुम्बई, २३ साउन । फिल्म दबंग ३ को सुटिङमा ब्यस्त रहेका बलिउड स्टार सलमान खानले सुटिङ सेटमा माेबाइलमाथि प्रतिवन्ध लगाएका छन् । फिल्ममा उनको लूकलाई गोप्य राख्न सलमान खानले सुटिङ यूनिट पुरैलाई मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरेका हुन् । जसकारण कतै उनको लुक बाहिर सार्वजनिक हुन सक्ने सलमानलाई चिन्ता पनि रहेको छ । यस फिल्ममा उनिसँग साई मान्जेकरले रोमान्स गर्नेछिन् । उनको यो..
समुन्द्रको तटमा वाणी कपूरको बिकिनी अवतार
ऐजेन्सी, २२ साउन बलिउड अभिनेत्री वाणी कपूरले हालै आफ्ना इन्स्टाग्राममा आफ्नो बोल्ड अवतार शेयर गरेकी छिन् । ती तस्वीरमा उनी निकै हट पनि देखिएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा आगो लगाउने ती तस्वीरले फ्यानको मन जितेका छन् । वाणीका तस्वीरमा फ्यानले खुबै मन परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसो त वाणी सामाजिक सञ्जालमा अक्सर बोल्ड अवतारमा देखिने गर्छिन् । उनले पोज पनि विभिन्न..
पाेखरा, २२ साउन नेपाली हाँस्य कलाकार जोडी सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले चलचित्र बनाउने चर्चा चलेको लामै समय भएपनि यसको घोषणा हुन सकेको थिएन । अब, यो जोडीले चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेको छ । रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्ने चलचित्रको नाम ‘सेन्टी भाइरस’ राखिएको छ । चलचित्र बजारमा ‘एन्टी भाइरसदेखि छल कपट’सम्म निकै चर्चामा थियो । यो चलचित्रमा सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, दयाहाङ राई,..
नयाँ दिल्ली, २२ साउन । सोसल मिडियामा बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हा पक्राउ परेकाे भिडियाे यतिबेला भाइरल बनेकाे छ । उक्त भिडियाेमा सोनाक्षीकाे हातमा हत्कडी लगाइरहेको देख्न सकिन्छ । भिडियोमा सोनाक्षीले आफूलाई यसरी पक्राउ गर्न नमिल्ने र आफूले केही गल्ती नगरेका कारण निर्दोष छु भनेर कराइरहेको सुन्न सकिन्छ । सोनाक्षीले भिडियोमा भनेकी छिन्, ‘तपाईंले मलाई यसरी पक्राउ गर्न सक्नुहुन्नँ । तपाईंलाई थाहा छ म को..
Results 914: You are at page 8 of 31